Mpanao Gazety Iray Hafa Nosamborina tao Zambia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2013 5:33 GMT
Nosamborina tamin'ny 17 jolay lasa teo ny mpanao gazety Zambiana Wilson Pondamali ary nampangaina ho “mitazom-baovao voarara.” Araka ny AFP, nisava ny tranon'i Pondamali ny polisy ary nahita antonta-taratasy milaza fa “tsy mendrika ny hitondra firenena” ny filoha Zambiana Michael Sata.” Nanambara ihany koa ny Polisy fa nahita porofo mampifandray an'i Pondamali amin'ilay tranokalam-baovao malaza Zambian Watchdog.
Pondamali no mpanao gazety fahatelo notazonin'ny polisy taorian'ireo manampahaizana manokana momba ny fampitam-baovao Clayson Hamasaka sy Thomas Zgambo, mpitati-baovao taloha tao amin'ny Zambia Daily Mail izay noraofina tamin'ny herinandro. Voampanga ho mampikomy i Zgambo hatreo. Tsy nisy vesatra niampangana an'i Hamasaka kosa saingy tsy maintsy mandalo any amin'ny polisy matetika izy.
Tamin'ny andro nisamborana an'i Pondamali, tsy azon'ireo mpisera manerana izao tontolo izao nidirana mihitsy ny Zambian Watchdog. Nitatitra ny Watchdog fa voasakana tamin'ny tambajotram-pinday rehetra tao Zambia ny tranonkala. Nisedra karazan-tsakana ara-teknika sy fandrahonana ankolaka avy amin'ny manampahefana ao amin'ny fitondrana hatrany ny habaka tao anatin'ny volana vitsivitsy izay.
Nitatitra ny The Zambian Watchdog :
Nilaza ny mpisera tamin'ny fiandohan'ity volana ity fa tahaka ny voasakana ny tranonkala afa-tsy tamin'ny FAI iray tao an-toerana ihany, dia tamin'ny MTN izany. Namaly tamin'ny alalan'ny fiovana vala vaovao ny Watchdog. Nifindra indray ny habaka taorian'izany, nankao amin'ny http://zwd.cums.in. Nandrisika ny mpamakiny hitsidika ny vala vaovao ny mpitantana ny habaka, na ho ao amin'ny Pejy Facebook.
Ary indrindra, tsy ho tapitra mihitsy ny fanenjika raha mifindra vala vaovao isak'izay voasakana. Namoaka lahatsoratra ny habaka omaly, “Ahoana ny idirana Watchdog eto Zambia amin'ny fampiasana proxies,” izay mampiroborobo ny lohamilina proxy sy fitaovam-piseraserana tsy ahafantarana anao tahaka ny tetikasa Tor. Nandrisika ny mpamaky handika sy handefa mailaka ny lahatsoratr'i Watchdog ihany koa ny habaka. Namaly tamin'ny alalan'ny fananganana fitaratry ny habaka ho an'ny Watchdog ny Mpitati-Baovao Tsy Voasakan-Tsisintany (RSF).
Ao amin'ny Brutal Journal ny bilaogera Nyalubinge Ngwende no nanoratra ny faharatsiam-ifandraisan'ny fitondrana amin'ny ambian Watchdog:
Eny tokoa, hatramin'ny andro voalohany nidirany teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2011 no nitadiavan'i Michael Sata “hametraka lalàna” momba ny tranokalam-baovao rehefa nibaiko ny Lehiben'ny Fampanoavana vao notinendry, Mumba Malila, handrafitra lalàna mifandraika amin'izany izy. Hatreo, noho ny tsy fivahan'ny olona momba ny Watchdog, tonga hatramin'ny fisamborana an'i Pondamali, Hamasaka ary Zgambo, hita fa miha-tsy mahazaka fantsom-baovao mahaleo tena sy mitsikera ao amin'ny firenena ny fitondrana Zambiana.
Botsoana 15 Desambra 2020
Fidirana 29 Novambra 2019
Fahalalahàna miteny 11 Oktobra 2019